China umtya umva kunye ibhegi mveliso kunye nabenzi | Huanyi
Umqolo ophantsi we-knee pain relief strap neoprene engalinganiyo nobungakanani beebhegi zonyango lwe-ice
UYILO LWEZANDLA-SIMAHLA, UBUDE BENKQUBO YOKUFUNDA BULUNGELE BONKE, UKUZIPHATHA NGOKUGQIBELELE
Isingxobo se-Ice senziwe ngamanzi, ilaphu elithambileyo lokuthinta, ikepusi engaphezulu evuzayo evulekileyo yokuvula ikepusi ukuvumela ukuzaliswa ngokulula kweetyhubhu zomkhenkce okanye umkhenkce otyunyuziweyo, kunye noyilo lwelaphu elincincileyo lenza ukuba ingxowa yomkhenkce ijikeleze naliphi na ilungu lomzimba.
Sonke siba nengxaki yokungonwabi okanye ukonzakala ngamanye amaxesha ebomini bethu, izihlunu ezibuhlungu, iintlungu ezidibeneyo okanye ukonzakala. Kwaye ngelixa singenakubathintela bonke, sinokukunceda ukuba uphinde ubenakho ukubhetyebhetye ngakumbi kwaye ube neentlungu ezingapheliyo kulo lonke usuku lwakho. isisongelo sonyango esithobayo siza nohlengahlengiso, ubungakanani-obulinganayo-yonke imitya eyenzelwe amadoda nabafazi.
Isisongeli se-neoprene kunye nemitya emi-2 yelastina ikunceda ugcine ibhegi yomkhenkce endaweni yayo ngokulula, ungayisebenzisa nakweyiphi na indawo kwaye wenze ezinye izinto ngelixa ufaka ubushushu okanye ingqele ebandayo.
Kukho umngxunya kwisongelo ukuze ubambe ipakethi yomkhenkce kwindawo, ungayisongela ngapha nangapha komqolo osezantsi, igxalaba, iqatha, idolo ngokudibeneyo kunye nemitya e-elastic kunye ne-hook eqinileyo kunye ne-loop yokuqinisa isongelo somkhenkce ukuze uyisebenzise naphina.
Uncedo lweNtlungu kunye noNyango: Faka isicelo kwangoko emva kokonzakala ukulawula ukudumba kunye nokudumba kwethishu ethambileyo. Ukubonelela ngesiqabu seentlungu ngokukhawuleza, unyango lwexesha elide kwaye kunceda ukulawula ukudumba kwezihlunu kunye nokudibana. Ipakethi ebandayo yejeli yeyona ndawo ipholileyo ebandayo yokwenzakala okuqhelekileyo kwaye iluncedo kuseto oluninzi, kubandakanya: amakhaya, iiofisi, izibonelelo zemidlalo, iindawo zokusebenzela nezikolo.
Egqithileyo Ipakethi yasemva kokubeleka
Emva kwepakethe yeqhwa
Ingqele yeGel Pack
Ingqele Hot Pack
I-Ice Pack emva kweNtamo yeNtloko
Ipakethi yomkhenkce ngasemva kwentamo
Iipakethe zomkhenkce ngasemva nasemqaleni
Iingxowa ze-Ice ezinokuphinda zisetyenziswe ukuze kunyangwe uMzimba
ingxowa yomkhenkce yonyango enokuphinda isebenze